Yeremia 41 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ismael kum Gedalia (1-10)
Yohanan nti Ismael guanee (11-18)
41 Bosome a ɛto so ason mu no, Elisama+ ba Netania ba Ismael a ofi adehye abusua* mu a ɔka ɔhene mpanyimfo ho no ne mmarima du baa Ahikam ba Gedalia nkyɛn wɔ Mispa.+ Bere a na wɔabom redidi wɔ Mispa no, 2 Netania ba Ismael ne mmarima du a na wɔka ne ho no sɔree, na wɔde sekan kum Safan ba Ahikam ba Gedalia. Enti okum nea na Babilon hene de no asi asaase no so no. 3 Ismael san kunkum Yudafo a na wɔka Gedalia ho wɔ Mispa no nyinaa, na okunkum Kaldeafo asraafo a na wɔwɔ hɔ no nso. 4 Bere a wokum Gedalia no akyi nnanu a na obiara nnim ho hwee no, 5 mmarima 80 fi Sekem+ ne Silo+ ne Samaria+ bae. Ná wɔayi wɔn abogyesɛ, asunsuan wɔn ntaade mu, de ade atwitwa wɔn ho,+ na na wokurakura aduan afɔre ne ɛhyɛ*+ a wɔde reba Yehowa fi. 6 Enti Netania ba Ismael fii Mispa kohyiaa wɔn, na ɔrekɔ nyinaa na ɔresu. Bere a ohyiaa wɔn no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommra Ahikam ba Gedalia nkyɛn.” 7 Nanso bere a woduu kurow no mu no, Netania ba Ismael ne mmarima a wɔka ne ho no kunkum wɔn, na wɔtow wɔn guu abura no mu. 8 Nanso wɔn mu mmarima du ka kyerɛɛ Ismael sɛ: “Nkum yɛn, na yɛde hwiit ne baali* ne ngo ne ɛwo pii asie afuw mu.” Enti wankum wɔn anka wɔn nuanom no ho. 9 Na Ismael tow mmarima a okunkum wɔn no nyinaa afunu guu abura kɛse bi mu, nea Israel hene Baasa nti Ɔhene Asa tui no.+ Saa abura no na Netania ba Ismael de mmarima a okunkum wɔn no afunu hyɛɛ no ma. 10 Na Ismael kyeree nnipa a aka wɔ Mispa no nyinaa.+ Wɔn mu bi ne ɔhene mma mmea, ne nnipa a wɔkae wɔ Mispa a awɛmfo so panyin Nebusaradan de wɔn hyɛɛ Ahikam ba Gedalia nsa no.+ Netania ba Ismael kyeree wɔn, na ɔde wɔn kɔe sɛ ɔrekotwa akɔ Ammonfo nkyɛn.+ 11 Bere a Karea ba Yohanan+ ne asahene a wɔka ne ho no nyinaa tee awurukasɛm* a Netania ba Ismael adi nyinaa no, 12 wɔfaa mmarima no nyinaa, na wɔkɔe sɛ wɔne Netania ba Ismael rekɔko. Na wɔkɔtoo no wɔ Gibeon asukɛse* no ho. 13 Bere a nnipa a wɔwɔ Ismael nkyɛn no nyinaa huu Karea ba Yohanan ne asahene a wɔka ne ho no nyinaa no, wɔbɔɔ ose. 14 Na nnipa a na Ismael akyere wɔn afi Mispa no nyinaa+ san wɔn akyi, na wɔne Karea ba Yohanan san kɔe. 15 Na Netania ba Ismael de, ɔne mmarima baawɔtwe guan fii Yohanan anim, na ɔkɔɔ Ammonfo no nkyɛn. 16 Na Karea ba Yohanan ne asahene a wɔka ne ho no nyinaa faa nnipa a aka a wofi Mispa no kaa wɔn ho, wɔn a wogyee wɔn fii Netania ba Ismael nsam bere a okum Ahikam ba Gedalia+ no. Na wɔde mmarima, ne asraafo, ne mmea, ne mmofra, ne ahemfi mpanyimfo no fii Gibeon san bae. 17 Enti wɔkɔe, na wɔkɔtenaa Kimham asoɛe a ɛbɛn Betlehem+ no sɛ wɔrefa so akɔ Egypt+ 18 esiane Kaldeafo no nti. Ná wosuro wɔn, efisɛ na Netania ba Ismael akum Ahikam ba Gedalia a Babilon hene de no sii asaase no so no.+
^ Nt., “ahenni aba.”
^ Anaa “atirimɔdensɛm.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nsu pii.”